အာဖရိကဦးချို- လက္ခဏာများ၊ စီးပွားရေးနှင့် ပဋိပက္ခများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 19/11/2021 10:00 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
El အာဖရိက၏ချို ၎င်းသည် အာဖရိကတိုက်၏ အရှေ့ဘက်စွန်းမှ ထွက်လာသော ကျယ်ပြန့်သော မြေကြီးဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်ရှိ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် မြောက်ဘက်ရှိ အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့ကြားတွင် တည်ရှိပြီး အာရေဗျပင်လယ်ထဲသို့ ကီလိုမီတာရာနှင့်ချီ၍ ရှည်လျားသည်။ ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် အာဖရိကဦးချိုသည် ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၇၇၂,၂၀၀ ကျော် လွှမ်းခြုံနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး အများစုမှာ မိုးနည်းပြီး မိုးနည်းသော ရာသီဥတုရှိသည်။ ဒေသအများအပြားတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော လူနေမှုဘဝများရှိနေသော်လည်း မကြာသေးမီက ခန့်မှန်းချက်အရ အဆိုပါဒေသ၏လူဦးရေသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 772,200 သန်းဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် အာဖရိကဦးချို၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စီးပွားရေးနှင့် သိချင်စိတ်များအကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
1 အာဖရိကဦးချိုဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်မှာတွေ့လဲ။
2 သော့ချက် features တွေ
3 အာဖရိကဦးချိုတွင် စီးပွားရေးနှင့် ပဋိပက္ခများ
4 အငတ်ဘေးနှင့် ခိုးကူး
အာဖရိကဦးချိုဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်မှာတွေ့လဲ။
ထိုဒေသသည် အနောက်အာဖရိကတွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးဒေသများထဲမှ တစ်ခုဟု သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ငတ်မွတ်ခြင်းသည် လူ့အသက်ကို အမြဲခြိမ်းခြောက်နေပါသည်။ ဒီနေရာဟာ လူသားတွေ မွေးဖွားရာနေရာလို့ ယူဆကြပါတယ်။
အာဖရိကဦးချိုသည် အာဖရိကတိုက်၏ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အတည်ငြိမ်ဆုံးသော ဒေသများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အီရီထရီးယား၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ကင်ညာ၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန်၊ ယူဂန်ဒါ၊ တောင်ဆူဒန်နှင့် ဂျီဘူတီ။ ၎င်း၏တည်နေရာသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချများအတွက် မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသောကြောင့် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်အင်အားကြီးနိုင်ငံများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အာဖရိကဦးချိုကို ၎င်း၏ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် အမည်ပေးထားသည်။ ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းမှာ အီသီယိုးပီးယား၊ အီရစ်ထရီးယားနှင့် ယီမင်တို့တွင် တည်ရှိသော အာဖရိကနိုင်ငံများမှ ဆင်းသက်လာကာ ၃ ရာစုနှင့် ၁၁ ရာစုကြားတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်က မုရန်၊ လောဗန် နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းများမှတဆင့် ဇီဝအရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါဒေသသည် ကာလရှည်ကြာ အကျပ်အတည်းတစ်ခုဟု ယူဆထားသည်။ လူဦးရေ၏ အရေးပါသော်လည်း ထိုနေရာတွင် စစ်ပွဲကြီးနှစ်ခု၊ အီသီယိုးပီးယားနှင့် ဆိုမာလီယာကြားစစ်ပွဲနှင့် အီသီယိုးပီးယားနှင့် အီရီထရီးယားကြားစစ်ပွဲတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုဒေသသည် မိုးခေါင်ရေရှားခြင်း သို့မဟုတ် ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို မကြာခဏခံရပြီး ထိုဒေသရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းသည် အလွန်ပြင်းထန်သည်။ 1982 နှင့် 1992 ခုနှစ်ကြားတွင် ငတ်မွတ်မှုနှင့် စစ်ပွဲကြောင့် လူ ၂ သန်းခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
Horn of Africa ၏ အထူးခြားဆုံးလက္ခဏာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အဓိကခြားနားချက်ကဒါပဲ Ethiopian Highlands ဟုခေါ်သော မိုးနည်းသောလွင်ပြင်များနှင့် မြေနိမ့်ပိုင်းများရှိသည်။ အကွဲအပြဲချိုင့်များဖြင့် နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။
လက်ရှိတွင်၊ ဦးချိုတွင် စပါးပင်၊ မြက်ပင်များနှင့် စိန့်ဂျွန် wort ဟု အများသိကြသည့် အဝါရောင်ပန်းပွင့်လေးများ ကဲ့သို့သော အသီးအရွက်များစွာရှိသည်။
ဒေသအများစုသည် မိုးနည်းသော်လည်း၊ အကွဲအပြဲ ချိုင့်ဝှမ်းကို တောင်တန်းများနှင့် တောင်တန်းများဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။
Simien တောင်တန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့် အကြီးဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးတောင်တန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
တိရစ္ဆာန်များစွာသည် ဤဧရိယာကို ၎င်းတို့၏နေအိမ်အဖြစ် အသုံးပြုသော်လည်း ကြမ်းတမ်းသောရှုခင်းနှင့် ရာသီဥတုပေါင်းစပ်မှုသည် တိရစ္ဆာန်မျိုးပွားရန်အတွက် ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။
အာဖရိကဦးချိုတွင် မွေးရပ်မြေတွားသွားသတ္တဝါများသည် အာဖရိကတိုက်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများထက် ပိုများသည်။
အာဖရိကဦးချိုအများစုသည် နှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှု အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် လွင်ပြင်များရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက် ရေရရှိရေး လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အီသီယိုးပီးယား၏ အနောက်ဘက်နှင့် အလယ်ပိုင်းဒေသများနှင့် အီရီထရီးယား၏ တောင်ဘက်စွန်းဒေသများ၊ မုတ်သုံရာသီတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပါက နှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှု တိုးလာသည်။
အာဖရိကဦးချိုကို အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်- အီရီထရီးယား၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ကင်ညာ၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန်၊ တောင်ဆူဒန်၊ ယူဂန်ဒါနှင့် ဂျီဘူတီ။
အာဖရိကဦးချိုတွင် စီးပွားရေးနှင့် ပဋိပက္ခများ
အာဖရိကဦးချိုတွင် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ၎င်းကိုထိခိုက်ခဲ့သော မိုးခေါင်ရေရှားမှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်းကို အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်စေခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည် XNUMX ရာစု၏ပထမဆုံးသောအငတ်ဘေးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။. စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုသည် ဖျားနာခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုနည်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လမ်းများသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့် အိမ်နီးနားချင်းများ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားခြင်းတို့ကြောင့် ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူ လူများပြည့်ကျပ်လာစေသည်။
အာဖရိက ဦးချိုများ ပါဝင်သော နိုင်ငံများတွင် အီသီယိုးပီးယားသည် ၎င်း၏ လူဦးရေ အဆင့်အတန်း၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေး အတွက် အခန်းကဏ္ဍ ကြောင့် အရေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အာဖရိကဦးချိုတွင် ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အာဖရိကဦးချိုတွင် တည်ငြိမ်ရေး၏ အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ အီသီယိုးပီးယားဖြစ်လာကြောင်း မှတ်သားထိုက်သည်။ အရှေ့အာဖရိကတွင် စီးပွားရေး အလျင်မြန်ဆုံး ကြီးထွားလာနေသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒေသက အကျပ်အတည်းဖြစ်နေပြီ။ မတူညီသော လူမျိုးစုများသည် အရင်းအမြစ်နှင့် နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ထိုဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများကြောင့် လူပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ သေဆုံးခဲ့ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ တိုင်းပြည်တွင် ၎င်းတို့အား လမ်းညွှန်ရန် မည်သည့် အမျိုးသား အစိုးရမှ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း၊ အရှေ့အာဖရိက လှုပ်ရှားမှုကို အာဖရိကဦးချိုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။; ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အရှေ့အာဖရိကမှာလည်း လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ- မျက်မှောက်ခေတ်တွင် မတူညီသော ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
အာဖရိကဦးချိုတွင် စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်းကို အငတ်ဘေးအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားပြီး ၁၉၆၀ ခုနှစ်များနောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းက အဆိုပါဧရိယာအား အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကြောင့် လူတစ်သန်းခန့် သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နိုင်ငံတကာအကူအညီမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြဿနာများနှင့် ပဋိပက္ခများသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုနှင့် အကူအညီများထွက်ပေါ်လာရန် ခက်ခဲစေသည်။
မိုးခေါင်ခြင်းသည် အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချို့နေရာများတွင် မိုးမရွာသည်မှာ နှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံများ ဆုံးရှုံးနိုင်ကာ အစာခေါင်းပါးမှုနှင့် ရောဂါဘယများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်မှု မပြုပါက အငတ်ဘေးသည် အာဖရိက ဦးချိုတွင် ပါဝင်သော အခြားနိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည် ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ယုံကြည်ကြသည်။ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ အချို့သော ထုတ်ကုန်များ၏ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနှင့် သူပုန်အဖွဲ့များ၏ စွက်ဖက်မှုတို့သည် ဒေသကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုပိုပြီး အကျပ်အတည်းထဲသို့ ထိုးကျသွားခဲ့သည်။.
ယင်းမှာ နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အတူ စစ်ရေးကင်းလှည့်မှုများ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်ကတည်းက ကျဆင်းလာခဲ့ပေမယ့် ပြဿနာက လုံးလုံးလျားလျား ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင်သည် Horn of Africa နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » အာဖရိက၏ချို